Toni Kroos Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay U Cayaarista Jarmalka – Garsoore Sports
Toni Kroos Oo…
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid Toni Kroos ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu ka fariistay waajibaadka xulka qarankiisa mana u ciyaari doono kulan kale qaranka Jarmalka.
Kroos ayaa warqad uu ku daabacay barahiisa bulshada kaga dhawaajiyay go’aankiisa.
“Waxaan u ciyaaray Jarmalka 106 jeer. Ma jiri doono waqti kale. Aad baan u jeclaan lahaa, wax walbana mar labaad ayaan siin jiray, waxaan saftay 109 kulan oo heer caalami ah waana guul, balse hadduu xulka aan kula guuleeysan lahaa Koobka Horyaaladda Yurub waxay ahaan lahayd natiijo wanaagsan dhammaadka waayaheeygan.”
“Waxaan qaatay go’aan ah inaan ka tago xulka Jarmalka kaddib tartankan [Euro 2020] muddo dheer. Muddo dheer bay ii caddeed inaanan diyaar u noqon doonin Koobka Adduunka ee 2022 ee Qatar, ”ayuu qoray Kroos.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa sidoo kale xusay in go’aankan uu ka caawin karo isaga sannadaha soo socda isagoo isku dayaya inuu diirada saaro kooxdiisa Real Madrid.
“Sababtoo ah waxaan doonayaa inaan si buuxda diirada u saaro himilooyinkeyga Real Madrid sannadaha soo socda. Intaa waxaa dheer, wixii hadda ka dambeeya waxaan si ula kac ah haatan nafsadeyda ugu oggolaan doonaa in aan ka fariisto cayaaraha heerka caalami oo aan qeyb ka ahaa kow iyo toban sano, ”ayuu raaciyay.
Kroos ayaa sidoo kale u mahadceliyay taageerayaasha iyo tababarayaashiisa xulka qaranka Jarmalka, kuwaasoo uu kula guuleystay Koobka Adduunka sannadkii 2014kii.
Cayaaryahanka waa 31 jir, Real Madrid ayaana haatan awood u yeelan doonta inay si keli ah ugu riyaaqdo bandhigyada ugu fiican ee Toni Kroos
Talyaaniga Oo Ciribtiray Biljimka Xilli Ay Isbaanishka Kula Balameen Semi-finalka